I-Boho Chic Maxi igqoke nge-Scarf - i-Buddhatrends
Boho Chic Maxi Gqoka ngeSharf
Small / Brown Ezincinci / ezihlaza Small / Red Medium / Brown Eliphakathi / elihlaza Eliphakathi / elibomvu Omkhulu / uBrown Omkhulu / oluhlaza Omkhulu / obomvu XL / Brown XL / oluhlaza XL / Ubomvu XXL / Brown XXL / iGreen XXL / oluBomvu 3XL / Brown 3XL / Green 3XL / Ubomvu 4XL / Brown 4XL / Green 4XL / Ubomvu 5XL / Brown 5XL / Green 5XL / Ubomvu
Yiba le nto ehlotyeni! Zama lo Mbobo obomvu obuninzi obumnyama kunye neSharf. Yenziwe kumxube we-Cotton kunye ne-Rayon, e-silhouette evulekileyo ikunika ukubonakala okufana ne-pixie-like. Dweba umgca phezu kwamagxa akho ukugqiba ukujonga kwakho okungaqhelekanga!
Ubude bemikhono: Sleeveless
Material: Ikhokotini, ilinen kunye neryon
E *** indawo S.
I-Armhole inkulu kakhulu, kufuneka ifike kuyo. Kodwa ihlobo liza kuba lihle kakhulu. enkosi
Iinqonga ezinkulu, kuya kufuneka zithathe
WOWU!! Andizange ndilindeleke ukuba uzuze njani lo mdlalo. YIHLOBO EZIQHELEKILEYO KUNYE NOKUBONELEKILEYO NGOMSEBENZI. UTHENGO LOKUPHELEKILEYO. UKUPHATHISWA KWAKUNYE OKUFILEYO. Ndiyamthanda lo mthengisi. ULUNTU LWEENKONZO. UKUPHUMA KUNYE NENKCAZELO ESEBHAYINI. NDIQONDISA UKUVUMA.
Njengoko kuboniswe kwaye njengoko kuchazwe! Yithande
Ndiyabulela kakhulu umyalelo, ndiyayithanda, iinkwenkwezi ezintlanu
Entle. Yithande le ngubo.